Khayaanada Maaliyadeed iyo Kooxda Xatooyada Aqoonsiga
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|U-doodista Dhibbanayaasha Dembiyada|Barnaamijka Khiyaanada Maaliyadeed iyo Xatooyada Aqoonsiga
Khiyaano maaliyadeed iyo dambiyada xatooyada aqoonsiga ayaa lagu qeexay RCW 43.330.300 sida khiyaanada jeegga, bixinta jeegagga bangiga ee sharci -darrada ah ee daba -dheeraada, lunsiga, khiyaanada kaarka deynta/kaarka, xatooyada aqoonsiga, been -abuurka, aaladaha been -abuurka ah, sida jeegagga ama dukumiintiyada, siddooyinkii jeegaga been -abuurka ee abaabulan, iyo habaynta garashada xatooyada.
Saameynta khiyaanada maaliyadeed iyo dembiyada xatooyada aqoonsiga ayaa sii kordheysa dalka oo dhan. Sida laga soo xigtay Javelin Strategy & Research's 2014 Khayaanada Aqoonsiga, 2013, 13.1 milyan oo macaamiil ah ayaa la kulmay khiyaano aqoonsi-heerka labaad ee ugu sarreeya ee diiwaanka. Intaa waxaa dheer, khiyaanada kaararka jira ayaa si isa soo taraysa caan ugu noqday dambiilayaasha, taasoo gacan ka gaysatay tirada ugu dhow ee dhibbaneyaasha khiyaanada aqoonsiga.
Ciidamada Hawl -galka Khayaanada Maaliyadeed iyo Xatooyada Aqoonsiga ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee noociisa ah ee ka dhaca Gobolka Washington. Waxaa jira laba hawl -wadeen oo hadda shaqeeya: Kooxda Hawl -wadeennada Greater Puget Sound FFIT iyo Kooxda Hawlaha FFIT ee Degmadda Spokane. Koox-hawleed kasta waxay baaraan khiyaanada maaliyadeed iyo kiisaska xatooyada aqoonsiga, iyagoo xoogga saaraya gobollo waaweyn oo ka sii adag, kiisas awood badan leh, oo ay ku jiraan tuhmanayaal badan.
Xubnaha Task Force waxaa ka mid ah federaalka, gobolka, degmada, iyo wakiillada fulinta sharciga maxalliga ah iyo baarayaasha warshadaha maaliyadeed oo u heellan wax ka qabashada saamaynta khiyaanada maaliyadeed ee qaybta gaarka loo leeyahay. Koox -hawleed kasta waxay u kulmaan si joogto ah si ay ula wadaagaan macluumaadka ku saabsan tuhmanayaasha muhiimka ah, isbeddellada dembiyada, xaaladda baaritaanka iyo xog kale oo muhiim ah. Sidaas darteed, dhowr kiis oo muhiim ah oo FFIT ah ayaa la baarayaa oo maxkamad la saarayaa.
Warbixinta 2020 FFIT ee sharci dejinta (PDF)
Warbixinta 2019 FFIT ee sharci dejinta (PDF)
Warbixinta 2018 FFIT ee sharci dejinta (PDF)
Warbixinta 2017 FFIT ee sharci dejinta (PDF)
Warbixinta 2016 FFIT ee sharci dejinta (PDF)
Macluumaadka Xatooyada Aqoonsiga
Guddiga Ganacsiga Federaalka: Macluumaadka Xatooyo Aqoonsiga (shabakad)
Guddiga Ganacsiga Federaalka: Warbixinta Xatooyada Aqoonsiga (shabakad)
Garyaqaanka Guud ee Gobolka Washington: Macluumaadka Xatooyada Aqoonsiga (shabakad)
Gaaritaanka Washington: Macluumaadka Xatooyada Aqoonsiga (shabakad)